Zasekuhlaleni Ikhowudi: 'Amandla Lamagqwetha kwaye Ukumelwa'. Izimvo - Abaqondisi-mthetho ukusuka Arab amazwe. Arab abaqondisi-mthetho kwi-intanethi.
Abaqondisi-mthetho ukusuka Arab amazwe. Arab abaqondisi-mthetho kwi-intanethi.
Zasekuhlaleni Ikhowudi: 'Amandla Lamagqwetha kwaye Ukumelwa'. Izimvo
Yakhe abaphumezi baba udushe kwaye wecawe
Inkqubo esemthethweni umgaqo-nkqubo umsebenzi kuba namhlanje umhla ingaba kwaphuhliswa iselwa ndivuma kakhulu
Ngenxa mthetho engundoqo regulator loluntu ubudlelwane phakathi.
Oku ingxelo ibonisa eziphezulu inqanaba inkqubela-phambili society. Kufuneka kuqatshelwe ukuba ilungelo akazange rhoqo iqhosha regulator. Kodwa ixesha sele proven ineffectiveness ezi iindidi kwimeko elawula abantu ke imisebenzi. Ezantsi umgca kukuba udushe izenzo kuphela ngomhla buthathaka ngomoya, inkolo ibe yiyo waqwalasela exclusively yi-okwenyani. Ngokulandelelanayo, umthetho zenza isiseko na oluntu umsebenzi. Oku ifekta wenza kokuhluma ka-ukutya umdla amaziko asemthethweni ukuba ingaba? kulo msebenzi. Umzekelo, very rhoqo a umntu, ngenxa busyness ubomi bakhe okanye nokungabikho a real ithuba, ayikwazi kakuhle ukuzithwala ngaphandle na iintshukumo. Ke ngoko, lowo abanye abathunywa bakhe imisebenzi namathuba komnye umntu egameni isiseko a athile asemthethweni iziko, apho sichaza kwi-inkcukacha Zasekuhlaleni Ikhowudi. Amandla lamagqwetha kwaye ukumelwa ingaba njalo iqhosha iindidi kule meko. Baya kuba kwezabo ethile, ukuphunyezwa, apho kuya kuba kuchaziwe kwi-ngakumbi inkcukacha emva koko kwi-inqaku. Phambi kwenu yaba kunye imisebenzi amandla lamagqwetha yayo ngqo idinga, kuyimfuneko ukuba nokuchaza budlelwane ngokwawo, apho udidi ngqo ikhona. Ngo yayo isakhiwo kwaye imisebenzi, isemthethweni budlelwane le uhlobo ngu iselwa elula.
Ngokunxulumene nezibonelelo yangoku umthetho kwaye abanye doctrinal izigwebo, ukumelwa ngu inkqubo committing na iintshukumo nge omnye umntu egameni lomnye othe uthunywe bakhe izakhono.
Oku isemthethweni institute sele arisen kwaye siphuhlisa kwiindawo zasekuhlaleni umthetho. Layo bukho imisela isebe imigaqo ukulingana ka-amaqela kwaye dispositions. Kodwa eyona ichanekileyo kwaye ichanekile ingaba differentiation ngokusekelwe izibonelelo zalo mthetho izenzo, balaseleyo, Zasekuhlaleni Ikhowudi ye-isirashiya. Njalo, kuyenzeka ukuba distinguish ezimbini engundoqo iintlobo - kukhankanywe iziko, umzekelo: lokuqala uhlobo kuthetha i-bukho kwaye umsebenzi we-institute ngaphandle ebusweni na isemthethweni iinyaniso. Umzekelo, abazali bamele isemthethweni abameli ngenxa yabo young abantwana, guardians kuba incompetent abantu, njalo-njalo. Njengoko kuba yesibini uhlobo iziko layo bukho ngu ngenxa ebalulekileyo isemthethweni fact - elokugqibela a treaty. Ngamanye amazwi, omnye umntu abathunywa bakhe amalungelo komnye umntu.
Izivumelwano oku uhlobo zibizwa ngokuba amagunya lamagqwetha.
Yabo isitshixo kwaye lidwelisa imisebenzi ingaba fixed yi-zasekuhlaleni ikhowudi. Amandla lamagqwetha kule meko kukuba endowed kunye large inani ethile moments ukuba kufuneka ziqwalaselwe. Ngoko ke, sifumene phandle ukuba kukho ukumelwa phantsi komthetho kwaye isivumelwano. Amandla lamagqwetha kule meko characterizes yesibini uhlobo lwe wathi iziko. Kodwa yintoni olu didi Ngokunxulumene Inqaku ka-Zasekuhlaleni Ikhowudi ye-isirashiya, amandla lamagqwetha ufumana i-yogunyaziso ka-a ukubhalwa uphawu oko kukuthi esikhutshwe omnye umntu komnye. Kwi isiseko olu xwebhu, igqiza labathunywa yamalungelo kwaye iintlawulelo-bamthwala ngaphandle. Eyona sebenza ngamandla lamagqwetha yile yokuba kunokwenzeka ekhutshwe bobabini amaqumrhu asemthethweni kwaye abantu, njengoko zasekuhlaleni ikhowudi ye-isirashiya ukuxelela kwethu.
Baninzi classifications zaziswe ngaphezu institute
Amandla lamagqwetha, ke ngoko, ufumana othile omnye-sided budlelwane, kuba ukumiselwa apho kwanele ukuvelisa iza kuphela yi-omnye umntu.
Njenge ezininzi isemthethweni iindidi, amandla lamagqwetha kusenokuba conditionally umahlule kwi eziliqela enxulumene amaziko. Kwicandelo elikhethekileyo ngu bamthwala ngaphandle ngomhla isiseko ubukhulu ka-transferred amagunya. Jikelele, enjalo ke ngoko ukwahlula kuphela kwaye uninzi reliable. Ngokungqinelana nomgaqo-oko, ezi zinto zilandelayo iintlobo amandla lamagqwetha ingaba elibalulekileyo, umzekelo: kubalulekile kukunceda kakhulu noting ukuba acacise nayiphi kwezi ke ngoko ingaba iqulathe yakhe izibonelelo Zasekuhlaleni Ikhowudi ye-isirashiya. Amandla lamagqwetha ngamnye uhlobo ngu deduced doctrinally, yi-studying i-iziko ka-ukumelwa uphela. Kule meko, imisebenzi ngamnye ke ngoko vumela kuthi ukuchonga ezona umdla kwaye ethile moments ye-udidi kubonisiwe kweli nqaku.
I-simplest indlela umthunywa eyakho amalungelo kwi-civilian candelo ufumana i-one-ixesha uxwebhu.
Amandla lamagqwetha le uhlobo zenza isiseko kuba accomplishing omnye ezibalulekileyo intshukumo kwaye akukho nto ngakumbi. Ngamanye amazwi, ezithile zomthetho frameworks zidaliwe ukuba uvumele ummeli ngqo ukusebenza ngomhla nawuphi na omnye umgca. Umzekelo iintshukumo yi-esebenza njengomqobo se-lo uhlobo ingaba ukuthengisa into, umamkeli, ukuthengisa impahla, njl-njl. Ngokupheleleyo ezahlukeneyo uhlobo kwigqiza labathunywa yamalungelo yimeko ekhethekileyo uhlobo uxwebhu. Ezinjalo amagunya lamagqwetha bamele kanjalo characterized yi-ubukho be engqongqo imida; nangona kunjalo, imply ngayo nayiphi na iintshukumo kuba isixa esithile ixesha. Ezinjalo amaxwebhu ingaba ethandwa kakhulu kwi-bume ye-systematic kombane kwempahla, iinkonzo imali ukususela imali irejista, njalo-njalo. Zasekuhlaleni ikhowudi, amandla lamagqwetha apho liqulathe yokusebenza engundoqo amaziko, akavumeli uhlalutyo lomgaqo-jikelele kwigqiza labathunywa ethile amalungelo nezibophelelo zethu.
Nangona kunjalo, ubukho be jikelele ke ngoko, kwakhona, waba deduced kwimfundiso.
Amandla lamagqwetha le uhlobo ngu ekhutshwe ukuze umntu ukuba enze ezithile eyenziweyo kunye nempahla kwi-inkqubo ukulawula oko. Oko kukuthi, asingawo uthetha malunga omnye umgca ka senzo, njengoko kwimeko ethile kwigqiza labathunywa, kodwa malunga i-exclusive inkqubo yamalungelo kuba ukumiselwa zokusebenza kwaye abarhwebayo kwaye administrative iinjongo. Abameli beli uhlobo bakhululekile ukuba conclude na izivumelwano, ngokunjalo ukusebenzisa ezinye isemthethweni budlelwane nabanye kwi-izinto ezichaphazela ulawulo injongo onikwe kubo. Jikelele Amandla Lamagqwetha inika abameli i-widest umqolo yamalungelo. Kufuneka kuqatshelwe ukuba Inqaku ka-amandla lamagqwetha kwi-Zasekuhlaleni Ikhowudi kuthetha malunga nenkqubo yolawulo olumanyanisiweyo imfuza ka-transferring onikwe amalungelo imisebenzi. Enjalo kwiziko ubizwa ngokuba unikezelo Ngokwelizwi lakhe izibonelelo, umntu abo sele wafumana imvume uxwebhu unako unikezelo yakhe izibophelelo, kwaye amalungelo umntu wesithathu. Ngamanye amazwi, isihloko somgaqo-isemthethweni budlelwane ngu indawo yawo.
I-re-crediting institute ayikho kakhulu ethandwa kakhulu namhlanje.
Nangona kunjalo, ayo bukho kuyimfuneko, ngenxa yokuba embodies i-essence ka-disposability ka-zasekuhlaleni umthetho. Iziko i-ka-dlulisa yamalungelo ekhankanywe inqaku iintlawulelo-ndabona ngendlela elula ifomu ezibhaliweyo. Nangona kunjalo, kukho inani iimeko xa amandla lamagqwetha kufuneka ube a umntu imbonakalo. I-exhaustive uluhlu enjalo moments enikwe ngu-Zasekuhlaleni Ikhowudi. Notarial amandla lamagqwetha, njalo, ekhutshwe kwigovernment inani zilandelayo iimeko: Kuzo zonke iimeko ayingenisileyo, uxwebhu delegating amalungelo nezibophelelo zethu kufuneka eziqinisekisiweyo yi-okhethekileyo notarial inscription.
I-i-small ipesenti izivumelwano ngu kuba i-unlimited ngokwe xesha.
Njengokuba umthetho, kukho abathile ixesha iyasebenza na isemthethweni budlelwane. I-uthunywe uxwebhu ayinguwo okukodwa kulo mba, njengoko Zasekuhlaleni Ikhowudi utshilo. Amandla lamagqwetha ngu esikhutshwe jikelele imithetho kuba hayi ngaphezulu kwiminyaka emithathu ezayo. Kule meko, kanye ixesha layo iyasebenza kufuneka obaluliweyo isivumelwano ngokwayo. Kungenjalo, amandla lamagqwetha iza kuphela kuba semthethweni kuba omnye unyaka. Kufuneka kuqatshelwe le exceptional ukubaluleka ethile, umhla kuba ukuseka amandla lamagqwetha. I-elokugqibela loxwebhu iya kuba ukwenzeka ngaphandle kobuso beli requisite. Inqaku ka-Zasekuhlaleni Ikhowudi ichaza ukuba kwi - kubekho umhla, amandla lamagqwetha iya kuba null kwaye boolean. Ukubaluleka le ukundulula kukuba kubalulekile kunye uncedo lwakhe ukuba uyakwazi ngokuchanekileyo ukubala ukuba semthethweni ixesha namandla lamagqwetha. Njengoko kuba amaxwebhu ekhutshwe kwi isiseko unikezelo, labo lokusebenza akukho ndlela inokusetyenziswa enkulu, elikhankanyiweyo ngokwe xesha kwi-isihloko deed, oko kukuthi, engundoqo enye. Ngoko ke, sinalo mbasa engundoqo amanqaku kubudlelwane kwigqiza labathunywa, ezaye kuthatyathwa uxwebhu ezifana Zasekuhlaleni Ikhowudi ye-isirashiya. Inqaku 'Amandla Lamagqwetha' wanika i-exhaustive isixa-mali iinkcazelo malunga peculiarities ye-isemthethweni budlelwane, ngokunjalo le ndlela kuba yayo imisebenzi, ukusebenza kakuhle kwaye termination.
Arab Ekuhlaleni kuba Intellectual Property
ARBITRASE ASSOCIATION AMERICAN
© 2021 Abaqondisi-mthetho ukusuka Arab amazwe. Arab abaqondisi-mthetho kwi-intanethi.